सत्यको शून्य पल: तयारी गर्न Ste कदमहरू Martech Zone
पछिल्लो वर्ष म Google मा एक प्रस्तुतीकरण गर्नका लागि एक सहयोगीको साथ उभें सत्यको शून्य पल। यद्यपि रणनीति कागजातमा एक टन प्रयास र सामग्री राखिएको छ, प्राय: आधुनिक मार्केटरहरूको लागि सामग्री पर्याप्त प्राथमिक छ। साधारणतया, निर्णय लिने पल जब तपाईं खरीद गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ सत्यको शून्य पल - वा केवल ZMOT।
यहाँ छ ZMOT प्रस्तुतीकरण मैले गरेँ:
यहाँ एक उदाहरणको रूपमा स्वचालित उद्योगको साथ शीर्षकमा एक विस्तृत भिडियो छ।
जबकि ZMOT क्रान्तिकारी नहुन सक्छ, गुगलले read तयारी सुझावहरू सूचीबद्ध गर्दछ जुन म विश्वास गर्दछु कुनै पनि अनलाइन मार्केटिंग रणनीतिमा समावेश गर्नुपर्दछ:
तपाइँको तल रेखाबाट सुरू गर्नुहोस् - तपाईंको व्यापारको लक्ष्य के हो?
मापन गर्न तयार हुनुहोस् - तपाईं सुधार गर्न को लागी परिणाम मापन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
मूलका साथ सुरू गर्नुहोस् - व्यक्ति तपाईलाई अनलाइन कसरी खोजिरहेका छन्, संलग्न गर्दै र खरीद गरिरहेका छन्?
तपाईंको ZMOT प्रतिज्ञाहरू राख्नुहोस् - जब उनीहरूले तपाईंलाई फेला पार्छन्, के तपाईंले उनीहरूलाई खोजिरहनु भएको जानकारी प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ?
१०/10 R नियम अनुसरण गर्नुहोस् - तपाईंको व्यवसायको वृद्धि गर्न उपकरण र सेवाहरूमा तपाईंको राजस्वको १०% निवेश गर्नुहोस्।
अगाडि खेलको प्राप्त गर्नुहोस् - तपाईको प्रतिस्पर्धा कहाँ छ भन्ने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित नगर्नुहोस्, यो कहाँ हुनेछ ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् वा उनीहरूले तपाईंलाई कसरी फेला पारेका बारेमा विस्तृत दृष्टिकोण लिनुहोस्।
माइक्रो रूपान्तरणमा नजर राख्नुहोस् - यो केवल खरीदको बारे मात्र होईन, सामाजिक गतिविधि हेर्नुहोस्, सदस्यताहरू, डाउनलोडहरू, रेजिष्ट्रेसनहरू, आदि। जसले संभावनाहरू ग्राहक बन्न पुग्दछ।
द्रुत असफल सुरु गर्नुहोस् - ठूलो रणनीतिबाट पछाडि हट्नुहोस् र सानो स्तरमा गति बढाउने तरिकाहरू खोज्नुहोस् - चुस्त रहनुहोस्।
मा पूरा विवरण डाउनलोड गर्नुहोस् ZMOT तयारी वर्कशीट र जाँच गर्नुहोस् सत्यको शून्य पल थप जानकारीको लागि साइट।
टैग: अटो विपणनमोटर वाहनमोटर वाहन बजार उद्योगGoogle +शून्य क्षणसत्यको शून्य पलZMOT